FJKM Ankadindramamy Fahazavana » Fanentanana
Fanentanana mikasika ny asa
Tomoera tsara amin’ny finoana, …
mahereza àry, ka aoka hitombandahy isika ho an’ny tanan’Andriamanintsika
(1 Korintiana 16, 13; 2 Samoela 10, 12)
Isaorantsika Andriamanitra noho ny fitondrany sy fitantanany ny fiainantsika, ny fiainan’ny Fiangonana. Isaorantsika Izy noho ny Fitahiana rehetra nomeny antsika nahafahantsika nanatanteraka ireo tetik’asa nofaritana tamin’iny taona 2014 iny . Teo ny asan’ny Fiangonana, ny Sampana sy ny Fikambanana rehetra. Eny teo koa ny asa tanterahintsika amin’izao Jobily faha-150 taona ny fiangonana amin’ny fananganana ny Trano Fiangonana ho Trano Vato.
Araka ny baikon’i Jesoa Tompo dia tsy maintsy miasa isika raha mbola atoandro ny andro ( Jaona 9, 4 ). Ny tombon’andro omeny antsika dia ndeha atokantsika hanaovana ny Asa Fitoriana ny Filazantsara, izay andraikitra lehibe indrindra apetrany amintsika mpanaradia Azy. Atolotra ho hitantsika eto ary ireo fandaharam-potoana rehetra tanterahina eto amin’ny F J K M Ankadindramamy Fahazavana amin’ity taona 2015 koa ento am-bavaka, manokana ny fotoana ahafahantsika miombona amin’ny Fiderana an’Andriamanitra amin’izany.
Marihina fa mandroso hatrany ny asa tanterahintsika amin’ny fananganana ny Trano Fiangonana vaovao, Trano Fiangonana Trano vato. Miezaka isika maneho ny tena endriky ny Trano Fiangonana eo amin’ny “façade principale”, efa vita ny varavaram-be hidirana amin’io “façade principale” io ( azontsika jerena ny sary ). Koa manentana antsika hatrany mba hitondra am-bavaka sy hanolotra izay anjara entina manatanteraka izao asa tsara napetraky ny Tompo tamintsika izao.